‘बल्छी ध्रुवे’ का नामले परिचित छन्, मरिचमान श्रेष्ठ। टेलिसिरियल ‘मेरी बास्सै’ बाट चर्चित बनेका उनी अहिले नयाँ कार्यक्रम निर्माणमा व्यस्त छन्।
नेपालमा सबैभन्दा बढी हँसाउने मानिस को हो जस्तो लाग्छ?
सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। म उहाँको डाइहार्ड फ्यान हुँ। कहिलेकाहीँ आफूलाई हँसाउन युट्युबमा उहाँका भाषण हेर्ने गर्छु। उहाँको भाषणले लास्टै हँसाउँछ।
पर्दामा माछा मार्ने मान्छेले वास्तविक जीवनमा माछा मार्नुभएको छ कि छैन?
छसात कक्षामा पढ्दा मारेको छु। गोरखामा हुँदाताका माछा मार्ने गोपाल दाइसँग एक घण्टा हिँडेर हुँडिखोलामा गएर माछा मारेको थिएँ। मेहनत गरेर दुवाली थुनियो। तर, माछा परेन। त्यसपछि कहिल्यै मारेको छैन।
माछा खान कत्तिको रुचाउनुहुन्छ?
एक पटक माछा खाँदा काँडा अड्किएकाले अलि डर लाग्छ। तर, सुकाएको, राम्रोसँग काँडा फालेको माछा भने मन पर्छ।
शरीरमा कुन अंग धेरै भएको जस्तो लाग्छ?
हातखुट्टामा भएका रौँ बिनाकामका लाग्छन्। यिनले पसिना निकाल्ने काम मात्र गर्छन्।
नारायणगोपालको ‘मुटुमाथि ढुंगा राखी हाँस्नुपर्‍या छ’ गीतजस्तै वास्तविक जीवनमा हाँस्न सकिन्छ त?
मुटुमाथि ढुंगा राखेर त अहिलेसम्म कोही हाँसेको छैन होला। तर, गीतको अर्थ केलाएर हेर्दा नेपालीको जीवनसँग मेल खाएको देखिन्छ। प्राकृतिक, सांस्कृतिक रूपमा धनी देशमा जन्मिएर पनि नेतृत्व राम्रो नहुँदा गरिब भएका छौँ। यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थालाई पनि नेपाली सामान्य ठान्न बाध्य छन्। गीतका शब्दजस्तै हामी नेपाली मुटुमाथि ढुंगा राखेर हाँसिरहेछौँ जस्तो लाग्छ।
टेलिभिजन एउटा मात्रै हुन्छ। त्यसलाई सेट (टेलिभिजन सेट) किन भनिएको होला?
टेलिभिजन कहाँ एक्लै हुन्छ त्यससँग रिमोर्ट पनि त हुन्छ। त्यसैले सेट भनिएको होला।
भविष्यमा तपाईंको छोरा जन्मियो भने नाम के राख्नुहुन्छ?
अमेरिका। किनभने, छोराको नाम अमेरिका भएपछि म अमेरिकाको बाउ हुन्छु। डोनाल्ड ट्रम्प, जर्ज डब्लू बुसको जस्तो उचाइ मेरो पनि हुन्छ।
विज्ञापन दिने एजेन्सीहरूको विज्ञापन किन नभएको होला?
विज्ञापन एजेन्सी कहाँबाट, कसले विज्ञापन दिन्छ भनेर खोज्दै मात्र हिँड्छन्। उनीहरूलाई कसैले खोज्दैन। त्यसैले विज्ञापन एजेन्सीको विज्ञापन नभएको होला।
फेसबुक ह्याक गर्नुपर्‍यो भने कसको र किन गर्नुहुन्छ?
ट्रम्पको फेसबुक ह्याक गर्थें। उनको नसके बलिउड अभिनेता शाहरूख खानको गर्थें। उनीहरूलाई संसारले चिनेको छ। उनीहरूले अरू मान्छेसँग के कस्ता कुरा गर्दा रहेछन् भनेर जान्न धेरै मन छ।
संसार रंगमञ्च हो भन्छन्। त्यसो भए त्यसका दर्शक खोइ?
मंगल ग्रह, कता–कता के–के भेटियो भन्छन्। त्यहाँ भएकाले हाम्रो संसारको रंगमञ्चमा मञ्चन भएका नाटक हेर्छन् होला नि !
मान्छेहरूलाई हँसाउन के गर्नुपर्छ?
मुख्य कुरा विषयवस्तुमा ध्यान दिनुपर्छ। सामाजिक विषयवस्तु हुनुपर्छ। हरेक मान्छेसँग सरोकार राख्ने विषय भएपछि उसलाई हास्यव्यंग्यले सजिलै छुन्छ।
पछिल्लो समय विकास भएको हास्यव्यंग्य र स्ट्यान्डअप कमेडीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
अहिले केही व्यक्तिले स्ट्यान्डअप कमेडी र हास्यव्यंग्यका नाममा अलि बढी नकारात्मक कुरा प्रस्तुत गरिरहेका छन् जस्तो लाग्छ। मानिसका गोप्य अंगका कुरा सुनाएर हँसाउनु कमेडी होइन, छाडा शब्द प्रयोग गरेर हँसाउनु कमेडी होइन भन्ने कुरा उनीहरूले बुझ्नु जरुरी छ। हिजोको हास्यव्यंग्यलाई आज विकास भइरहेको हास्यव्यंग्यले गिज्याइरहेको जस्तो लाग्छ।
आफूबारे सबैभन्दा रमाइलो लागेको जोक कुन हो?
सामाजिक सञ्जालतिर राजु मास्टर र मेरो तस्बिरलाई लिएर बनाइएका ट्रोल खूब हेर्छु। ती रमाइला लाग्छन्। त्यसबाहेक एक पटक बल्छीको गेटअपमा भएको मेरो फोटोसँग निश्चल बस्नेतलगायत अन्य केहीलाई लिएर ‘राम्री केटीहरू कालो केटा भनेपछि हुरुक्कै हुन्छन् रे’ भन्ने जोक आएको थियो। त्यो पनि रमाइलो लागेको थियो।